Allgedo.com » Dagaaladii ka socday agagaarka Dheeka-Suftu oo qaboobay iyo Oromadii oo dib loo riixay
Dheeka-Suftu, Liibaan (AOL) – Dagaaladii ka socday deegaano ku dhow degmada Dheeka-Suftu ee gobolka Liibaan ee dhulka Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya (DDSI) ayaa galabta yara qaboobay kaddib markii ey xoogagga difaaca Soomaalida dib u riixeen meleeshiyaadkii Oromada ee uu hadafkoodu ahaa in ey qabsadaan dhul aanay laheyn.
Dagaalka oo saddex goobood ka bilowday aroornimadii hore ee manta waxuu duhurnimadii ku fiday deegaanka Gaaluun oo degmada Dheeka uga beegan dhanka Koofur Galbeed.
Mileeshiyaadka Oromada oo gacan ka helayay kuwa Jabhadda Oromo Liberation Front (OLF) oo ilaa maanta weeraro aan kala go’ laheyn ku hayay qaar ka mid ah deegaano hoos taga degmada Dheeka ayaa galinkii danbe ee galabta dib loo riixay ayada oo dhimashada iyo dhaawaca labada dhinac soo kala gaarayna aanan ilaa iyo hadda la hubin inta uu la’eg yahay.
Dhanka kale, goob jooge ku sugan jiidda hore ee uu dagaalka ka socda oo ka gaabsaday in aan magaciisa shaacino ayaa waxuu AOL u xaqiijiyay in dagaaladii maanta dhacay mileeshiyaadka Oromada qasare aad u balaaran loogu geystay, ayada oo ey jiraan maxabiis laga qabsaday iyo saanad ciidan oo aad u fara badan oo gacanta looga dhigay.
Dagaalada oo maqribnimaddii maanta istaagay ayaa waxaa la filayaa in ey mar kasta dib u bilaaban doonaan.
Waxii faah-faahin ah ee kusoo kordha dagaalka oo wali socda, isha ku hay AOL oo aan idinkugu soo gudbin doono macluumaad la xariira dagaalkaasi.